Kooxda Liverpool Oo Guul Looga Gaaray Garoonkeeda Xili Uu Adkaaday Garuubka D
HomeHoryaalka IngiriiskaKooxda Liverpool oo guul looga gaaray Garoonkeeda xili uu adkaaday Garuubka D
November 26, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha 0
Liverpool ayaa caawa lagu jiid jiiday garoonkeeda Anfield ka dib markii ay guuldarro 2-0 ka soo gaartay kooxda Talyaaniga ee Atalanta kuwaasoo ka aargoostay Reds oo guul weyn ka gaartay kooxda Atalanta markii martida loo ahaa.
Labo gool oo deg deg ah oo ay Atalanta dhalisay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa ku hogaamisay guusha iyadoo xiddigaha da’ yar ee Liverpool uga ciyaarayay daafaca la soo bandhigay khibrad yaridooda.
Group D ayaa adkaaday haatan iyadoo Reds ay ku hogaamineyso 9 dhibcood halka Ajax iyo Atalanta ay leeyihiin min 7 dhibcood.
Tababare Jurgen Klopp ayaa shan bedel ku sameeyay shaxdiisii ugu danbeysay ee Premier League iyadoo Mohamed Salah uu soo laabtay ka dib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras laakiin boosaska daafaca ayaa lagu soo bilaabay xiddigo da’ yar oo aan khibrad badan laheyn halka weerarka ay Mo Salah ku caawinayeen Mane iyo Origi.
Isbedelka badan uu sameeyay tababare Klopp ayaa saameyn ku yeelatay qaab ciyaareedkooda iyagoo soo bandhigay kubad lagu caajiso qeybtii hore ee ciyaarta, mana aysan abuurin wax fursad weyn ah.
Xaqiiqdiina fursadii ugu weyneyd ciyaarta qeybteedii hore waxaa heshay kooxda martida aheyd ee Atalanta iyadoo Robin Gosens uu badbaadin fantastik ah ku qasbay goolhaye Alisson.
Khibrad yarida daafaca Liverpool ayaa banaanka u soo baxday daqiiqadii 60aad markii Atalanta ay hogaanka u qabatay ciyaarta iyadoo Papu Gomez uu karoos fiican ka soo qaaday garabka bidix, waxaana lugta la helay oo shabaqa ku taabtay Josip Ilicic oo ka hoos baxay Tsimikas.
Afar daqiiqo ka dib kooxda Talyaaniga ayaa dheereysatay hogaankeeda markii ay dhaliyeen goolkoodii labaad. Daafaca Liverpool ayaa mar kale muujiyay khibrad yari u ogolaatay Atalanta inay dhaliso gool aad u sahlan.
Gomez aaya mar kale karoos ka soo dhigay garabka bidix, waxaa madax ku celiyay Hans Hateboer iyadoo Robin Gosens uu shabaqa si sahlan ugu taabtay.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 2-0 oo Liverpool lagu garaacay iyadoo Reds ay weli hogaamineyso Group D iyagoo leh 9 dhibcood, waxaa kaalinta labaad ku jirta Ajax oo 4-0 caawa ku soo xasuuqday kooxda reer Denmark ee Midtjylland kuwaasoo tartanka ka haray halka Atalanta ay ku jirto kaalinta 3aad iyagoo 7 dhibcood la wadaagaya Liverpool.
Group D ayaa adkaaday haatan iyadoo Liverpool ay kulankeeda xiga Anfield ku soo dhaweyn doonto Ajax 1da bisha December halka Atalanta ay la ciyaari doonto kooxda hartay ee Midtjylland.